အရပ်ရပ် အခွင့်အရေး လိုင်စင်များ ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် ရောင်းချမှုမှ ကျပ်သိန်း ၂၃၆ဝ ကျော် ပိုမ? - Yangon Media Group
အရပ်ရပ် အခွင့်အရေး လိုင်စင်များ ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် ရောင်းချမှုမှ ကျပ်သိန်း ၂၃၆ဝ ကျော် ပိုမ?
”စစ်ကိုင်းအရပ်ရပ်အခွင့် အရေးလိုင်စင်များအတွက် ဒီနေ့ ၁၁ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီမှာ စ ရောင်းတာ ညနေ ၅ နာရီမှပြီးပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် စက်တင်ဘာ ၁၈ မှာ ဆက်ရောင်းပါ့မယ်။ ဈေးပြိုင်စနစ်လေလံတင်ရောင်းချပွဲမှာ မြို့မဈေးကြီး အမဲ၊ သိုးဆိတ်အပါအဝင် တစ်ခြားလုပ်ငန်းတွေကျန်ပါသေးတယ်။ ဒီနေ့ ရောင်းချရာမှာ စုစုပေါင်း ကြမ်းခင်းလေလံဈေး ၈၆၂၉ သိန်းတစ်သောင်းသုံးထောင့် ခြောက်ရာဖြစ်ပြီး ရောင်းရငွေကျပ်သိန်း ၁ဝ၉၉ဝ တစ်သောင်းရှစ်ထောင်ဖြစ်တာကြောင့် ပိုရောင်းရငွေကျပ် ၂၃၆၁ သိန်းနှင့် လေးထောင့်လေးရာရရှိပါတယ်”ဟု စစ်ကိုင်းမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းနိုင်က ပြောသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၌ သဘာဝဘေးကျရောက်ပါက လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ခရိုင်အလိုက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ ကျပ်သိန်း ၁၀ဝ စီကြိုတင်ထုတ်ပေးထား
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွင် မိသားစုပါတီပွဲတစ်ခု ကျင်းပနေချိန် သေနတ်သမားများ၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ၁၃ ဥ
အိန္ဒိယပိုင် ကက်ရ်ှမီးယား၌ အစိုးရနှင့် သူပုန်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်၊ လေးဦးသေဆုံး